Mhirizhonga yeCCIDID-19 yakapararira kubva kuGuadeloupe kuenda kuMartinique
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Martinique Kupwanya Nhau » Mhirizhonga yeCCIDID-19 yakapararira kubva kuGuadeloupe kuenda kuMartinique
Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Caribbean • mhosva • France Kuputsa Nhau • Hurumende Nhau • Health News • Martinique Kupwanya Nhau • nhau • vanhu • Kutarisirwa • chengetedzo • ushanyi • Kufamba Wire Nhau • Trending Now
Mapurisa nevashandi vemoto vakanangidzirwa nepfuti muFort-de-France
Varamwa mabasa vanonzi vakatsamwa nekusatambirwa nagavhuna weMartinique pakupera kwezuva ravo rekutanga kuratidzira.
Nezuro, masangano gumi nemanomwe evashandi pachitsuwa cheFrance cheMartinique akadaidzira kuti varamwe kuratidzira kuratidza kupokana kwavo neCCIDID-17 vaccine yevashandi vehutano uye kuisirwa kwehutano hweFrance coronavirus.
Asi kuratidzira kwakakurumidza kuita Guadeloupe-style mhirizhonga yemhirizhonga ine mishumo yemapurisa nevadzimi vemoto mukati MartiniqueGuta guru reFort-de-France riri kuuya pasi pepfuti.
Zvinhu zvakatowedzera apo varamwa mabasa vanonzi vakatsamwa nekusatambirwa nagavhuna weMartinique pakupera kwezuva ravo rekutanga kuratidzira.
Kunyange hazvo pasina kukuvara kwaitwa, vezvemitemo nevashandi vezve emergency emergency vakaramba vakanangidzirwa nepfuti apo vaipindira kudzima moto mumigwagwa yeveruzhinji muguta reFort-de-France nezuro manheru.
Maererano ne MartiniqueMutauriri wezvekuchengetedzwa kweruzhinji, Joël Larcher, mapurisa nevashandi vemoto vakanangidzirwa nepfuti, uye mota dzakawanda dzakapiswa panguva yemhirizhonga yehusiku.
Vapanduki vakavhara migwagwa yakatenderedza chitsuwa cheFrench Caribbean uye vakumbira hurumende zvakati wandei, kusanganisira kupera kwegwaro rekudzivirira reCCIDID-19 kune vanochengeta, pamwe nezvikumbiro zvakakura sekuwedzera kwemihoro uye kudzikiswa kwemitengo yemafuta.
Mhirizhonga yeMartinique yapararira kubva pedyo Guadeloupe, uko mhirizhonga yakadzika mushure memasangano evashandi akaronga kufamba svondo rapfuura kupikisa zvirambidzo zveCCIDID-19 ipapo, kusanganisira kuunzwa kwekumanikidza anti-coronavirus jabs kuvashandi vehutano.